Daawo: Muuse Suudi oo sheegay cidda loo haysto askarigii badbaado qaran ee Muqdisho lagu dilay - Wardeeq 24 TV Daawo: Muuse Suudi oo sheegay cidda loo haysto askarigii badbaado qaran ee Muqdisho lagu dilay Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Daawo: Muuse Suudi oo sheegay cidda loo haysto askarigii badbaado qaran ee...
Daawo: Muuse Suudi oo sheegay cidda loo haysto askarigii badbaado qaran ee Muqdisho lagu dilay
Senator Muuse Suudi Yalaxow ayaa ka hadlay dil si arxan darro ah magaalada Muqdisho loogu geystay askari ka tirsanaa ciidankii Badbaado Qaran ee ka hor tagay mudo kororsigii Farmaajo iyo gabar Weriye ah oo maanta ay jir dileen Taliyaha saldhigga booliska ee degmada Xamarweyne iyo askar uu watay.
Senatorka oo fariin u diray ra’iisul wasaare Rooble ayaa ka dalbaday inuu jawaab deg deg ah ka bixiyo labadaas dhacdo ee mid lagu dilay askariga, midna lagu jir dilay Weriyaha.
“Waxan leeyahay ra’iisul wasaareheena, amniyaad balan qaaday, nin askari ah ayaa la dilay oo qashin-qub la dhex dhigay, markii aad amniga balan qaaday kadib, gabar Weriye ah ayuu gacanta ula tegay taliyaha saldhigga Xamarweyne oo qalabkii ka jejebiyey, labadaas dembi ra’iisul wasaare adigaa laguu heystaa,” ayuu yiri Xaaji Muuse Suudi.
Waxa uu sheegay in hadii uu Rooble tallaabo ka qaado ragii geystay labadaas dembi ee dilka iyo jir dilka kala ah uu noqonayo in ka soo baxay balantii uu ka qaaday shacabka, laakiin hadii uu wax ka qaban waayo uu noqonayo nin gadaashiisa uu Farmaajo wax uga dheelaayo.
Sidoo kale Sanetorka ayaa xasuusiyey ra’iisul wasaaraha in dhamaan dadka Soomaliyeed ay wada adeeceen markii uu balan qaadyada u sameeyey.
“Waxaa soo haray xoolahaan loogu deeqaayo ciidanka Badbaado Qaran istaagi maayaan, ra’iisul wasaare ciidankii magaalada waan ka saarnay, jidadka waan furnay, howsha waan kaaga dambeynaa, laakiin Farmaajo oo meesha aan ka bixin Geellu joogsa maayo, Iduhu joogsan maayaan, lana seexan maayo,” ayuu yiri Senator Muuse Suudi Yalaxow.
Askariga la dilay ayaa la sheegay inuu qeyb ka qaatay dadaalladii looga hor tegayey mudo kororsigii fashilmay ee Farmaajo, waxaana shalay meydkiisa laga helay goob qashin-qub ah oo u dhaw dugsiga tababarrada booliska Soomaaliya ee Jeneraal Kaahiye.
Sidoo kale askar uu watay Taliyaha saldhigga booliska ee degmada Xamarweyne ayaa maanta Talada Xaawo-taako ee afaafka hore ee madaxtooyada ku jir dishay Weriye Fardowso Maxamuud Sahal oo ka tirsan shaqaalaha Radio Kulmiye, xilli ay ku howlaneed tebinta dibadbaxyo ay dhigayeen waalidiinta askartii la waayey ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea.
Weriye Fardowso ayaa sheegay inay dhaawacyo ka soo gaareen gacanta iyo sinta, kadib markii ay laamiga ku garaaceen askartii uu watay taliyaha saldhigga Xamarweyne, sidoo kale Taliyaha ayey sheegtay inuu gacantiisa uga qaaday talefoonkeedii iyo qalabkii ay ku howlgaleysay ee warbaahinta.
Senator Muuse Suudi ayaa amarka falalkaas ku eedeeyey inuu bixiyey madaxweyne Farmaajo, isagoo ra’iisul wasaare Rooble ka dalbaday inuu ka hor tago aar gudasha uu Farmaajo ka wado gadaashiisa.
Previous articleWararkii ugu dambeeyey ee shirka DF iyo dowlad goboleedyada iyo xubno soo gaaray Muqdisho
Next articleWar; Deg, Ah; Wariye Axmed Xuseen oo ku geeriyooday Muqdisho